भाग्यमानी छोरो – Part 24 – चियाबारीमा -२ - Naughty Nepali
Home » Incest Sex Story » भाग्यमानी छोरो – Part 24 – चियाबारीमा -२
होटलको रुममा छिर्नासाथ बेडको छेउमा रहेको साईड टेबलमा किनेको सबै चिज राखें अनि विकेशको आमालाई च्याप्प समाएर बेडमा लडाउँदै उनको स्कर्टलाई कमरतिर सारिदिएँ त्यसपछी उनको स्किनी पेन्टीलाई हल्का औंलाले छेउतिर तान्दै सिधै मुख जोडेर पुती चुस्न थालें । एकछिन पुती चुस्दै गर्दा विकेशले पनि आमाको टि-शर्टलाई खोलिनै दियो अनि ब्रेसियर सहितको बुब्सलाई मजाले मसल्न थाल्यो । विकेशको आमाले ढोकातिर देखाउँदै ईशाराले बन्द गर्न भन्नुभयो, मैले “पुती आए चिकिदिउँला लाँडो आए हजुरलाई चिक्ला टेन्सन नलिनु… मजा नै हुन्छ !” विकेश मजाले हाँस्यो । मैले एउटा आईसक्रिमको कप खोलें र काठको चम्चाजस्तो बस्तुले आईसक्रीम कोट्याएर विकेशको आमाको पुतीमा दलिदिएँ, आईसक्रीमको चिसोले विकेशको आमा हल्का छटपटाईन् । त्यसपछी मैले अर्को कप विकेशलाई दिएँ र विकेशले पनि मैले झैं आमाको बुब्समा आईसक्रीम दल्दै बुब्स चुस्न थाल्यो । निकैबेर त्यसरी खेलेपछी, मैले विकेशको आमाको पुतीमा निकै आईसक्रीम थुप्राएँ र लाँडोलाई उनको पुतीमा छिराएँ, विकेशको आमाले सिरिङ्ग भएझै गरिन् । दुईचोटी आईसक्रीमले भरिभराउ पुतीमा लाँडो चोपलेपछी म उठेर विकेशको आमाको मुखमा लाँडो छिराएर चुसाउन थालें । मैले उसको आमाको मुखमा लाँडो कोचाएको देखेपछी विकेश तल झरेर आमाको पुती चुस्नमा तल्लिन भयो । बेलाबेलामा मैले विकेशको आमाको मुखबाट लाँडो निकाल्दै आफ्नो लाँडोमा पनि आईसक्रीम दल्दै चुसाउँदै थिएँ, विकेशपनि आमाको पुतीमा आईसक्रीम हाल्दै चाट्दै थियो । जब मैले विकेशको आमाको मुखबाट लाँडो निकालेर हातले खेलाउँदै, विकेशलाई हटाएर चिक्नको लागि लाँडोलाई उनको पुतीमा छिराएर मच्चिन सुरु गरें, विकेशले आफ्नो लाँडोमा आईसक्रीम दल्दै आमाको मुखमा छिराएर भित्र-बाहिर गर्न थाल्यो । मैले विकेशको आमालाई चिक्दा उनको बुब्स मजाले हल्लिएर मलाई अझै उत्साहित गर्दै थियो, मैले चिक्दाचिक्दै विकेशको आमाको एउटा बुब्सलाई हातले समाएर निचोर्दै पनि थिएं । घरि-घरि उनको निपल्सलाई मैले दुई औंलाले समाएर तान्दै छोड्दै पनि गर्थे, मैले विकेशको आमाको पुतीबाट लाँडो निकालेर चाकमा लाँडो छिराएँ अनि फेरी चिक्न थाले, चाकमा चिक्दै गर्दा पनि मैले उनको टि.सी.लाई दुई औंलाले च्याप्दै तानेर छोड्ने गर्दै थिएँ । विकेशको आमाको मुखमा विकेशको लाँडो भएको कारणले गुँ गुँ बाहेकको आवाज बाहिर आएको थिएन ।
मैले विकेशको आमाको चाकबाट लाँडो निकाल्दै भनें “ओई मुजी चिक आमालाई कति लाँडो मात्रै चुसाउँछस् !” र गएर कोठाको ढोका बन्द गरेर आएँ, विकेश सिधै आमाको चाकमा लाँडो छिराएर चिक्दै थियो, मैले विकेशको आमाको मुखमा केहिबेर लाँडो चुसाएँ अनि विकेशलाई भनें “अब आमालाई दुवैतिरबाट चिक्नुपर्छ !” अनि विकेशको आमालाई बेडबाट उठाएर आफ्नो काखमा लिएर पुतीमा लाँडो छिराईदिए र उनको दुवै तिघ्रालाई समातेर उठाएर आफू ठाडो परें त्यसपछी विकेशलाई भनें “चाकमा हाल !” विकेशले हाम्रो पछाडी उभिएर आमाको चाकमा लाँडो छिरायो र हामी दुवैले धमाधम चिक्न थाल्यौं । निकैबेर आमालाई काखमा उचालेर चिकेपछी थकान महसुस भईसकेको थियो । मैले विकेशको आमालाई भुईंमा बसाउँदै भनें “आमा ! एकपटक दुवै लाँडो मुखमा छिराएर हेर्नु त ?” विकेशको आमाले हत्तपत्त हामी दुवैको लाँडो एक-एक हातले समाउनुभयो र मुखमा छिराउने कोशिस गर्नुभयो । दुवै लाँडो उनको मुखमा छिराउने कोशिस गर्दा टुप्पो मात्र छिर्न सफल भयो तर दुवै लाँडोलाई चिके जसरी भित्र बाहिर गर्न सम्भव भने भएन । त्यसपछी मैले विकेशलाई खाटमा उत्तानो सुत्न लगाएँ अनि खाटको छेउतिर म भएतिर फर्केर लाँडोमा पुती छिराउन लगाएं । विकेशको आमाले मैले भनेको हरेक कुराहरु अनुसरण गरिरहेकी थिईन्, जब विकेशले आमाको पुतीमा लाँडो छिरेपछी चिक्न सुरु गर्*यो, मैले विकेशको आमाको मुखमा किस गरें र लाँडोलाई समाएर उनको पुतीतिर सोझ्याउँदै भनें “अब मेरो लाँडो पनि छिराउँछु है त ?” विकेशको आमाले मुस्कान मात्र दिईन् र मैले लाँडोलाई विस्तारै उनको पुतीमा छिराउने कोशिस गरें । सुभद्राको पुतीमा पहिला त्यसैगरि बुबा र मैले चिकेका थियौं, विकेशको लाँडोसँग मेरो लाँडो घर्षण गर्दै आमाको पुतीमा छिर्*यो र हामीले धमाधम चिक्न सुरु गर्*यौं ।
सुभद्राको पुतीमा पहिला त्यसैगरि बुबा र मैले चिकेका थियौं, विकेशको लाँडोसँग मेरो लाँडो घर्षण गर्दै आमाको पुतीमा छिर्*यो र हामीले धमाधम चिक्न सुरु गर्*यौं । विकेशको आमालाई सुरुमा हल्का पीडा भएको उनको अनुहारको हाउभाउबाटै थाहा हुन्थ्यो । तर हामी रोकिएनौं र पीडामिश्रित आवाजमा विकेशको आमाले हामीलाई साथ दिईरहिन् । झर्ने बेला भएपछी मैले विकेशको आमाको पुतीबाट लाँडो बाहिर निकालें अनि विकेशको आमाको अनुहारदेखि बुब्ससम्म फुसी फालें, छिनमै विकेशले पनि आमाको छातीमा फुसी फाल्यो । मैले फेरी विकेशको आमाको मुखमा लाँडो छिराएर चुसाउन थालें, विकेश थकित भएर बेडमा पल्टिईरह्यो भने आमाले चाँही दुवै बुब्सलाई एकापसमा रगड्दै फुसीलाई लतपत पार्दै रहिन् । मेरो लाँडो पनि अब आफ्नो आकार गुमाउन तिर लागेको थिएँ । मैले सोधें “कस्तो लाग्यो त हजुरलाई दुईटा लाँडोको पेलाई !” “बाबु त चिक्नमा कस्तो खप्पीस् मलाई त सधैं चिकाईरहुँ जस्तो भईरहेको छ !” “ओई विकेश ! हेर त आमा त सधैं मसित चिकाउँछु भन्नुहुन्छ त ? बिहै नै गरौं क्या हो ?” विकेश र विकेशको आमा दुवै लामो हाँसो हाँसे साथमा म पनि हाँसें । “हुन्छ, तेरो स्वास्नीलाई चिक्न दिन्छस् होला नि त मलाई !” अनि निकैबेरसम्म पनि हामी तिनैजना नाङ्गैनै बेडमा पल्टिरह्यौं । मैले अघि ल्याएको अंगुर पखालें अनि दुई-तिनवटा अंगुरका दाना विकेशको आमाको पुतीमा छिराईदिएँ र भनें “ओई विकेश ! बेलुकातिर निकालेर खाई है ! अनि भोली म आँउदा पनि केहि अंगुर यसरी नै राखिराख्नु बिहानै देखि… म खान्छु नि !” विकेशले म हिँड्न लागेको ठानेर भन्यो “बस ! अब खाजा खाएर जालास् !” त्यसपछी विकेशले कपडा लगायो र तल रेष्टुरेण्टमा उत्रियो, मैले पनि कपडा लगाए, जब विकेशको आमाले कपडा लगाउँदै थिईन् मैले भनें “आमा ! भोली चाहीँ ब्रा र पेन्टी नलगाउनु होला है !” विकेशको आमाले लगाईसकेको पेन्टी खोल्दै भनिन् “भोली किन अहिलेदेखि नै लगाउँदिन नि !” विकेश आईपुग्यो र भन्यो “सेकुवा र बियर मगाको छु है !” आमालाई बिचमा राखेर विकेश र म दुवै साईडमा टाँसिएर बसेका थियौं, कोही आउँदै गरेको आवाज सुनेपछी मैले आमाको टि-शर्टलाई निकै तल तानेर निपलको वरपरका घेरा प्रष्ट देखिने बनाएँ र टाङ्ग पुरै खुलाएर पुती झलक्कै देखिने गराएँ । जब एउटा ट्रेमा तिनवटा बोतल बियर अनि सेकुवा लिएर एउटी केटी छिरी, मलाई चलाखी गर्न मन लाग्यो र आमाको कानमा खुसुक्क भनें “आमा ! यो केटी नजादैं मेरो लाँडो निकालेर खेलाईदिनु न है ?” विकेशको आमाले तुरुन्तै मेरो पेन्टको जिपर खोलेर पेन्टभित्रै हात छिराएर लाँडो खेलाउन थाल्नुभयो, मैले विकेशको आमाको छातीमा टि-शर्टभित्र हात छिराएर बुब्स खेलाउन सुरु गरें । त्यो केटी आँखा चोर्दै बियर र सेकुवा टेबलमा राख्ने बेलामा हामीलाई हेरिरहेकी थिई । विकेशको आमा र म उसलाई वास्तै नगरी आफैंमा मस्त भएझैं गर्*यौं, त्यो केटी बाहिर निस्कने बेलामा पनि हामीलाई फर्कि-फर्कि हेरेर गई । यद्यपी त्यो केटीलाई चिक्ने मेरो कुनै लक्ष्य थिएन । विकेश र म उसको आमासँग बियर र सेकुवा खाँदै खेल्यौं र झण्डै साढे पाँच बज्दा म त्यहाँबाट निस्केर सानीआमाको घरतिर लागें ।
chak chikeko katha, chikeko katha, chiyabari ma chikeko, erotic story nepali, inscest sex story, inscest story, iscest nepali sex story, lado chusi, lado puti ma, lado puti ma chikeko story, naango boobs, nepali erotic story, nepali inscest story, nepali puti, nepali puti chikeko, nepali sex story, Pallo Ghar Ko Neha Le Lado Chusi, puti chikeko, puti chikeko nepali, puti chikeko story, puti mai jhardiy, puti mai jhardiye, rubina, rubina chikeko, sex katha, sexy katha
भाग्यमानी छोरो – Part 23 – चियाबारीमा 1